TAMAANDHO "SABABTOO AH": SIFEYNTA IYO SIFOOYINKA LAGU KOBCIYO NOOCYO KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Tomato "Sababta": beeritaanka geedo iyo daryeelka goobta
Had iyo jeer way ku fiicantahay inaad soo gurato miraha beerta, taas oo aan ku beeray sidii farcan gurigeyga ka dib, ka dib, markii ugu horeysay ee kuleylka kuleylaha, waxaan ku beeray hawo cusub, oo la waraabiyey, la jecel yahay, la quudiyey, iyo bacrimiyey. Beer weyn oo tamaandhaysan oo qurux badan oo dhadhan fiican leh ayaa ah riyadii beert kasta oo kasta. Maanta, miraha kuwan waxaa la cuni karaa mid cusub, berrito - si loo xiro ilaalinta iyo casiirka tamaandhiga, iyaga oo naftooda siinaya waxyaabo waxtar leh ee jiilaalka oo dhan. Xaaladahan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad si guul leh u xulato noocyo kala duwan oo yaanyo ah. Dad badan ayaa markiiba soo iibsadaan dhowr jeer, si ay u eegaan waayo-aragnimadooda, si ay u tijaabiyaan oo u doortaan mid ka mid ah dalabka mustaqbalka. Haddii aad doorbideyso inaad doorato miro waaweyn, markaa waxaad jeclaan doontaa noocyada kala duwan ee tamaandhada "Persimmon", dheeraad ah oo aad ka baran doonto maqaalkan.
Tamaandho "Dhibicsan": noocyo dabeecad
Tamaandhada ayaa magaceeda u bixisay sabab. Nooca iyo midabka midhihiisa midabkiisu ma kala duwanaan karo midhaha, taasoo loo yaqaan "ciriiri". Tamaandhadu waxay u taagan tahay sifooyinka soo socda:
midabka liinta leh midab yar oo dahab ah;
ku wareegsan qaab muuqaal ah;
dhadhanka kala duwan.
Waxay si fiican u koraan aqalka dhirta lagu koriyo, halkaasoo dhererkeedu uu gaari karo in ka badan hal mitir, iyo dhul furan. Under xaaladaha sii kordhaya wanaagsan, miraha koraan aad u ballaaran iyo si dhakhso ah u buuxin. Waxay leeyihiin dhadhan macaan oo qurux badan iyo hilibka ku filan, taas oo ah sababta ay martida u jecel yihiin diyaarinta saladh cusub.
Ma taqaanaa? Mararka qaarkood miisaanka mid ka mid ah yaanyo waxay gaari karaan nus nus kiilo.
Sidaa darteed, haddii aad dareentid u nugul geedka si ay u koraan si dhakhso ah, halkii, xir oo taageero siiyo, haddii kale miisaan weyn oo weyn oo burburin kara yaanyada. Waa in la ogaadaa in dhirta lafteeda aan la kala soocin by daciifnimada ee laamihii iyo afkoda - ay, lid ku ah, waa xoog leh, laakiin weli mararka qaarkood awoodin in ay iska caabbiyaan load ee miraha.
Baro noocyo kale oo yaanyo ah sida "Katya", "Bruin Bear", "Tretyakovsky", "Red Guard", "Bobkat", "Crimson Giant", "Shuttle", "Batanyan".
Si aad u gaarto tirooyinka aadka u weyn ee miisaanku waa mid aad u adag. Tani waxay u baahan tahay daryeel taxadar leh iyo quudin qani ah. Laakiin celcelis ahaan, daryeelka caadiga ah, waxaad heli doontaa 200 ilaa 350 g halkii yaanyo, taas oo sidoo kale aad u badan. Muddada dillaacu waa 120 maalmood. Waxay ka tirsan tahay koox dhexdhexaad ah khudaarta. Waqtiga fruiting waa muddo dheer: laga bilaabo dhammaadka July ilaa dhaxan ugu horeysay. Waa sahlan tahay in la fahmo marka tamaandhadu diyaar u yahay inuu soo goosado: waxaa jira meel cagaaran oo ku yaal miro macquul ah iyo sida ugu dhakhsaha badan oo ay u baaba'do - yaanyada horey loo soo qaadan karo oo loo diri karaa miiska cuntada.
Sidaad u aragtay, yaanyada "Persimmon", dabeecadda noocyada kala duwan waxay ku farxi doonaan dad badan oo xaafadda deggan, sidoo kale waxay leeyihiin sifooyin xun. Mid ka mid ah cilladaha waaweyni waa iska-caabinta yaraanta cayayaanka iyo cudurada, laakiin haddii aad u digto waqtigeeda, masiibada waa laga fogaan karaa.
Waa muhiim! Ogaanshaha in mid ka mid ah dhirta uu soo maray cudurka, waa in laga saaro goobta, taas oo ilaalineysa yaanyo kale oo dhan.
Faa'iidada tamaandhada "Sababtoo ah", sharaxaad ka duwan noocyo kala duwan oo horayba u leh astaamo wanaagsan, ayaa loo aaneyn karaa xaqiiqada ah ee faa'iido ahaan u ah alaabta cuntada. Waxaa loo tixgeliyaa cunnooyin, waxaana lagu kaydiyaa qadar badan oo carotene ah ama kiniinitamiin A. Qeybtaani waxay lagama maarmaan u tahay aragtida, waxtarna u leh ilaalinta dhallinyarada maqaarka, xoogga ciddiyaha iyo timaha. Waa muhiim in carotene aan la lumin inta lagu jiro ilaalinta. Sidaa daraadeed, kala duwanaanta noocaas ah waxay u fiican tahay diyaarinta xilliga qaboobaha sida alaabta waxtar leh. Waa wax xiiso leh in ay tahay kaniinitamiin taas oo siinaysa yaanyo midab ah orange-jaalle ah. Waxaa habboon in la ogaado cirridka cufan, taas oo ka dhigaysa habka ururinta iyo gaadiidka yaanyada ku habboon, inkastoo aan si fiican loo qiimeynin habka loo isticmaalo alaabta.
Koraaya yaanyada "Sababta" iyadoo loo marayo geedo
Si aad u hesho dalagga hore, weyn iyo qurux, iyo geedo u baahan tahay si loo diyaariyo. Laakiin iska taxadara, maxaa yeelay yaanyada laga yaabo in aanay ku filnayn ilaalinta - way badan yihiin.
Ma taqaanaa? Ku dhowaad 90% oo ka mid ah miraha lagu beeray ayaa hubaal gari doona, isla markaana waxay diyaar u noqon doonaan in lagu beero ciidda hawada cusub.
Waqtiga ugu wanaagsan ee geedo beero
Waqtiga ugu fiicnaanta abuurka abuurka ee dhulka ayaa hoos u dhacaya koowaad iyo bilowga bisha labaad ee guga.
Ciid u hayaa geedo sii kordhaya
Seeds waa inay ku dhacaan qaab dhismeedka cufan oo cufan, oo kor ka sarreeya waa inay daboolaan lakabka bacriminta, sida peat ama bacrin ah. Lakabka caaggan oo kale ah maaha wax ka yar 10 mm.
Si aad u hesho yaanyada wanaagsan ee bisha July, waxaa lagama maarmaan ah in si wanaagsan loo abuuro iyo daryeel ee geedo guga. Waa muhiim inaad carrada u soo qaadato balakoonka ka hor inta aadan beerin si uu u sii joogo qabow dhowr maalmood. Sidaas, waxaad nadiifisaa jeermiska waxyeelada leh iyo dirxiga kale.
Diyaarinta abuurka beeridda
Mustaqbalkaaga goosashadaada wuxuu si toos ah ugu tiirsan yaanyo yaanyo. Inta badan waxaad siinaysaa faracadan yar, tan ka badan waxay ku siin doontaa xagaaga marka goosashada. Intaa waxaa dheer, diyaarinta saxda ah ee abuurka ayaa badbaadin doona dhirta cudurada, adkee. Waxaad bilaabi kartaa hawlaha diyaargarowga ah dhamaadka bisha Febraayo. Marka ugu horeysa waa in la doorto "rajo" abuur ah, waaweyn iyo culus. Waa sahlan tahay in la eego tayada farcanka, kaliya ku dhaji abuurka galaas biyo ah oo shaaha oo milix ah lagu kala diri karo. Waqtigee sugto: banaan, iftiin, aan lahayn nafaqo, hadhuudhku wuxuu ku faafi doonaa. Waxaan u baahannahay kuwa ku soo degay hoosta. Waxaan ku dhejinay faashad oo kululeynaa batteriga saddex maalmood.
Hadda waxaannu ilaalinaa cudurrada. Nidaamkani waa inuu ka takhaluso abuurka bakteeriyadaha ama fayrasyada lagu soo dhajiyo. Si arrintan loo sameeyo, dhig miro xalka xalalka kiniinka ah ilaa 20 daqiiqo. Beddel manganisku wuxuu noqon karaa doorasho dheeraad ah oo la awoodi karo - hydrogen peroxide (aan ka badnayn 3%), kaas oo ah in la kululeeyo 40 darajo. Nidaamkani wuxuu qaadanayaa 8 daqiiqo oo keliya mana jiri doono.
Waxaan soo bandhigno xujada koritaanka abuurka ee baradhada, hadhuudhka, bagalka, kaabajka kale, cilantro.
Hadda miraha yaanyada "Persimmon" waa in la bacrimiyo, sababtoo ah waxay dhaliddu waxay inta badan ku xiran tahay kulaylka geedka iyo ciidda leh walxo waxtar leh. Taas waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo xalal gaar ah oo laga iibsan karo dukaanka. Maaddada ayaa lagu qooyay xalka diyaarinta maalin, ka dibna la dhigo xaashi warqad u ogolaaneysa in si qumman loo qalo.
Marxaladda mas'uulka ah - qulqulaya. Biyaha diirran ayaa lagu shubay dheriga ama daboolka iyo faashad abuurka ah waxaa la dhigaa, iyada oo weliba, si buuxda loogu daboolay biyo. Hawlgalku wuxuu socdaa 12 saacadood, halka 4 saacadood kasta ay tahay inuu baddalo biyaha. Maydhso abuurka ku jirta sharo qoyan ama warqad gaar ah. Tani waxay ka caawinaysaa in goosashada mustaqbalka si dhakhso ah loo fuulo.
Waa muhiim! Tamaandhirku waa mid aad u diirran, sidaa daraadeed waa mid waxtarka leh.
Fikradda nidaamkan waa heerkul aad u kulul. Sidaa awgeed, miraha waxaa la dhigaa qaboojiyaha habeenkii, oo dib u geliyaa kuleylka gelinka dambe, dib u celi tallaabooyinka 2 ama 3 jeer. Sidaas awgeed waxaad dhirtaada ka ilaalinaysaa hargabka habeenkii ah ee aan la filaynin. Nidaamka waxaa lagu fulin karaa geedo, u keenaya balakoonka 14 maalmood ka hor intaan la dhicin ciidda, haddii heerkulku aanu ka yarayn 12 darajo. Toddobaad ka hor intaan la beeriin, waxaad furi kartaa daaqadda, iyo 3 maalmood, oo gebi ahaanba ka baxdo dhirta hawada cusub.
Waxaan bartay sida loo diyaariyo ciidda iyo miraha noocyo yaanyo ah "Ciriiri", taas oo kuu ogolaanaysa inaad bilowdo beerahooda. Awoodda geeddi-socodkan, waxaad dooran kartaa mid kasta, waxa ugu muhiimsan in ay jiraan godado laga soo-saaro dareeraha qaybta hoose. Darbiyadaha maraakiibta noocan oo kale ah, ka hor intaan la buuxin asal ahaan qoyan, waxay u baahan yihiin in lagu daboolo xal of kaneecada. Masaafada u dhexaysa abuurka waa 1 cm, qoto dheer - 2 cm.
Xaaladaha iyo daryeelka daryeelka
Qiyaastii 14 maalmood waxaad arki kartaa sida geedo-geedka ay u baxsanayaan, waana lagama maarmaan in la abuuro shuruudaha wanaagsan ee iyaga loogu talagalay:
ku dabool dhamaan weelasha leh filim kasta;
ku rid meel diiran;
Qorraxda ha dhigin;
biyo 2 jeer maalintii (kaliya iyada oo shaandho leh biyo) heerkulka uusan ka yarayn +22 ° C, ama ku buufin.
Waa muhiim! Shaqadaadu maaha inaad ku shubato dhirta, laakiin kaliya in ay qoyaan ciidda. Xusuusnow, yaanyo ma jeclaanayo qoyaan badan.
Isku day inaad si joogto ah ula socoto koritaanka geedo. Sida ugu dhakhsaha badan qorraxda ugu horeysa ee muuqata, waxaan ka saarnaa filimka. Tani waxay dhacdaa 6 maalin kadib. Hadda waxaad dhigi kartaa santuuqyada qorraxda qorraxda oo sug in caleemaha ay u muuqdaan. Inta lagu jiro mudadaas waa suurtogal in la waraabiyo dhirta xoogga leh: hal mar 5 maalmood waa ku filan. Maalintii kowaad, waxaad isticmaashaa biyo kulul, sida aad horay u sameysay. Maalmaha soo socda waa kala tagsan yihiin. Ka dib markii aad waraabiso, qolka hawo qalaji.
Xaaladaha sii kordhaya iyo daryeelka ee geedo yaanyo
Waxaa la ogaaday 3 caleemo geedo yar yar - waqti soo qaado. Tani waa geedi socodka kala soocidda dhirta iyo iyaga oo u geynaya weel waaweyn, weel gaar ah oo loogu talagalay horumarinta buuxda ee nidaamka xididka iyo biqilka seedling.
Ha ka baqin nidaamkaan, sababtoo ah xitaa haddii aad dhaawacdo xididdada geedo, dhirta weli waa la badbaadin karaa. Ku dhajinta dher cusub, waxaad u baahan tahay inaad ku aaso dhowr caleemo.
Ma taqaanaa? Beerta qaar waxay si gaar ah u soocaan xididada si ay u helaan cabsi iyo Gagaab xitaa dhakhso.
Waraabinta inta lagu jiro mudadaas waa in la fuliyaa sida dhoobada sare. Marka sii kordhaya geedo waa in la fuliyaa iyo quudinta. Waxaa fiican in la sameeyo labadii toddobaadba mar. Guud ahaan, waxaad leedahay 3 quudin. Ujeedadaas darteed, Bacriminta organic iyo macdanta ku habboon. Tusaale ahaan, faleebo caan ah oo laga soo qaaday qolofta ukunta. Cunto:
Saddex meelood laba meelood oo ka mid ah daasadaha 3-litir waxay ka buuxsameen qolofka.
Ku shub biyo.
Ku adkeyso 4 maalmood meel diiran.
Dili 1 qaybood oo faleebo leh saddex qaybood oo biyo ah.
Caleemaha caafimaad qaba leh burooyinkeeda iyo caleemaha quruxda leh waa nooca yaanyo caafimaad qaba oo lagu beeray sariirta beerta.
Geedo geedo ah oo yaanyo ah "Cidhiidhi ah" meel joogto ah
Waqtiga ugu habboon ee degitaanka
Kala duwan "Sababta" ayaa jecel kulaylka, sida, dhab ahaantii, noocyada kale. Sidaa darteed, waqtiga ugu fiican ee transplanting ciidda furan noqon doonaa dhamaadka May, marka cimiladu hore u dejisay. Wixii waddooyinka waqooyiga ah, waxaa suurtogal ah in lagu koro oo lagu koriyo ama lagu koriyo.
Xulashada goobta degelka: iftiinka iyo ciidda
Noocan ah baahida qorraxda iyo kuleylka. Waxaa muhiim ah in la helo meel bilaash ah isaga, tan iyo geedo si aad u dhaqso badan oo degdeg ah inta lagu jiro xilli. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la beero yaanyada midba midka kale oo si joogto ah u xoqin.
Qaadashada Tamaandhiga micnaheedu waa in la ogaado meesha ay ku koraan. Waxaa muhiim ah in lagu beero geedo taajir ah oo bacrin ah. Haddii sannadkii la soo dhaafay ay khudradda kale ku korayeen meeshan, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ogaato midka ay yihiin iyo haddii ay ku xiran yihiin noocyada kala duwan.
Ma taqaanaa? Doorashada qiyaasaha horey loogu soo qoro waxay ku saleysan tahay cudurrada caadiga ah. Taasi waa, "Persimmon" ayaa si liidata u kori doona marka khudaarta lagu meeleeyo cudurro isku mid ah.
Wixii "Sababtoo ah" kuwa ugu horreeya ee ugu fiican waxay noqon doonaan:
Tag meelaha ay barandhadu, eggplants ama basbaaska markiiba tagay. Goobta la doortay ee yaanyada waxay u baahan tahay in la beddelo sanad walba, iyo xilli saddexaad waa in lagu celiyo meesha hore.
Geedo beerto geedo
Waxaad ubaahan tahay inaad ku beerto mid ka mid ah jirida of seedling ah. Ka fogow fogaanta ugu yaraan 30 sentimitir midba midka kale. Sida horay loo xusay, kala duwanaanshahan waa mid u adkaysata cudurada. Haddii aad dhirtii dhirta aad ugu dhowaato, markaa infekshankan cudurkani waa sida suurta galka ah, iyo marka kiiskani dhimashada beeraha oo dhan waa lama huraan. Qoto dheer ee dhulka waa ugu yaraan 15 cm.
Talooyin ku saabsan yaanyo "Xaalad"
Si taxadar leh u daryeelidda dhirta waa, miraha badan ee aad soo ururin doonto. Si aad u baabbi'iso waa mid fudud, laakiin ma fududa in la koro.
Tamaandhadu ma jecla biyaha badan, laakiin haddii xagaaga uu yahay mid qalalan, markaa si fudud ayaa lagama maarmaan u ah inay dib u cusboonaysiiso ciidda. Sida caadiga ah, waxaad waraabin kartaa dhirta maalin kasta, mar, iyada oo raacaysa adigoo xakameynaya ciidda.
Waa muhiim! Biyaha waa inaysan ka badnayn +15 ° C, adoo socodsiinaya socodka dhulka oo aad ka taxadarayso inaadan ku dhicin caleenta. Haddii kale, horumarinta cudurada fangasku waxay u badan tahay.
Waa inaad la macaamishaa haramaha, kuwaas oo ay jiraan tiro badan.
Markaad la macaamilaysid haramaha, waxaad sidoo kale u baahan kartaa daroogo sida Ground, Agrokiller, Roundup, Lontrel-300, Titus.
Waxaad la dagaalami kartaa iyaga oo leh caawinta herbicides:
caymiska - "Titus", "Zenkor";
ciid - macnaheedu waa "Stomp".
Doorashada labaad waa geedo la buufiyo xitaa ka hor intaanay soo degin. Waqtiga isticmaalka waa in si gooni gooni loo go'aamiyaa, iyada oo ku saleysan booska haatan ee warshadda iyo heerka koritaanka haramaha.
Waa muhiim in la fuliyo buufin joogto ah ee dhirta. Sida kaliya ee aad ku gaari karto goosashada weyn. Ha ilaawin bacarimiso ciidda. Bacriminta dabiiciga ah waa in la daboolaa xilliga dayrta. Fursad ahaan, waxaad ku dari kartaa dharka macdanta: dhoobada iyo walxaha fosfooraska. Sidaas darteed waxaad u diyaarisaa ciidda beeritaanka guga. Guga waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto xeryaha nitrogen.
Ka hor inta beerto geedo dhulka ku, waxaad ku dhajin kartaa 1: 1 ratio, oo leh xal of kaneecada iyo biyaha. Tani waxay ilaalinaysaa geedo ka timaadda cudurka. Ka dib 3 toddobaad kadib markaad isku furto waxaad sameyn kartaa quudinta koobaad:
walxaha nitrogen - 25 g;
Fosfooriga - 15 g;
biyaha - 10 l.
Taasi waxay ku filan tahay ilaa 16 yaanyo. Inta lagu jiro xilliga ubaxka, dhaymada labaad ee ka yimaada faleebo toddobaadle ah oo ka kooban halabadan soo socda:
Waxaad ku dari kartaa daboolka haramaha.
1 l of bacriminta noocan oo kale ah waa in lagu dhejiyo 1 warshad.
Wixii geedi socodka pollinada firfircoon, marka hore waxaad ku buufin kartaa isku dar ah:
karkaraya 1 l;
100 garaam oo sonkor ah;
2 g oo ah alkol boric.
Marka halbowlaha la qaboojiyey, waxay noqonaysaa mid yar oo diirran - waa waqtigii lagu buufin lahaa geedka.
Marka tamaandhadu bilaabmayo inuu midho u dhasho, waxaad gelisaa xalka halkan dhulka (sida aagga xididka):
5 litir oo biyo ah karkaraya;
2 litir oo ash;
Waxaad xiiso u yeelan doontaa inaad ogaato sida loo quudiyo yaanyada ka dib beerashada dhulka.
Ka dib markaad qaboojiso, waxaad u baahan tahay inaad ku darto biyo (qiyaastii 4 litir), iodine (dhalada oo dhan) iyo 10 g of boric acid. 1 l of isku dar ah waa in lagu kiciyaa 6 l oo biyo ah iyo warshad kasta si ay u qoondeyso 1 l of this xal.
Garter iyo jarjar
Miraha ayaa aad u culus, iyo dhirta lafteedu waa heer dhexdhexaad ah, inkastoo ay adkeyd, laakiin waxay u baahan tahay garaf. Tani waa in lagu sameeyaa saldhig khasab ah haddii aad leedahay dhirta aqalka dhirta lagu koriyo, oo dhererkeedu mararka qaarkood gaaro 1.5 m. Marka geedi socodka kordhaya yaanyada tamaandhada ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo abuuro, sababtoo ah noocyada noocan ahi waxay u nugul yihiin koritaanka xooggan ee laamaha. Caleemaha dhinaca soo koraya ee dhirta ayaa si weyn u dhirta, taasoo hoos u dhigaysa dhalidda. Ka dib oo dhan, sidaas yaanyo yaryar siinayaa dhammaan walxaha faa'iido leh in aan midhaha, laakiin caleemaha cusub. "Sababtoo ah" waxay ku biiraan safka yaanyada geedka.
Qeexiddani waxay soo jeedinaysaa in dhirta aysan joojin doonin koritaanka ka dib muddo cayiman. Waxay sii wadi doontaa inay si firfircoon u koraan oo kor u qaadaan iyo dibedda.
Sidaa darteed, dhammaan xagaaga, si joogto ah waxay u baahan yihiin inay soo saaraan carruur cusub oo ka muuqan doona dhammaan caleemaha hal mar. Raac sharciyada:
waxaad leexin kartaa jaranjarrada oo keliya geedo xoog leh;
dhererka ugu wanaagsan ee qaybtan waa 6 cm;
samee habka ugu fiican subaxa;
si aad uga saarto tallaabooyinka aad u baahan tahay si aad u isticmaashid oo kaliya gacmahaaga, iyo walxaha walxaha la gooyo.
Tallaabooyinka ka hortagga cayayaanka iyo cudurrada
Dhibaatada ugu weyn ee tamaandhada "Persimmon" ayaa ku jirta caabuqa hooseeya ee cudurka, sida lagu xaqiijiyey dib u eegista beeralayda. Sidaa daraadeed, si looga fogaado guurka, dhirta oo dhan waxay ku xiran yihiin daaweyn ka hortag ah. Khatarta cudurku wuxuu dhacaa marka horay loo soo dego, kor u kaca ama qaboobo gaaban guga. Qodobka miisaanka ee ugu waxtarka badan ee ilaalinaya "Sababta":
Biyaha iyo nus litir waxay karkaraan dambaska (qiyaastii pound) oo ay adkeynayaan.
Isla markiiba ku kari saabuun saabuun (50 g) biyo (10 l).
Isku qas laba walax iyo yaanyo joogta ah, gaar ahaan haddii cimiladu aanay degganayn.
Ka hortagga horumarinta fangaska waxaa lagu sameeyaa caawinta 6 kiniin ah "Trikhopol", oo laga iibsan karo farmasiga caadiga ah. Waa in lagu kala diraa 7 litir oo biyo ah kuna dar 250 ml caano. Xalku waa diyaar.
Sidaad u aragtay, sii kordhaya yaanyo "Dareemo" waa mid aad u adag. Laakiin waxa miraha qurux badan, casiir leh oo aad ka soo qaadan karto laga bilaabo bisha Luulyo. Shaqadaadu maaha inay seegto dhammaan shucuurta, sababtoo ah mustaqbalka beergooyskaagu waxay kuxirantahay wax kasta oo yar.